ओली सरकारले लक-डाउन खुले लग`त्तै ६ लाखलाई रोजगारी दिने तयारी !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/ओली सरकारले लक-डाउन खुले लग`त्तै ६ लाखलाई रोजगारी दिने तयारी !!
काठमाडौ । कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका र स्वदे`शमा बेरोगार रहेका ६ लाख नागरि`कलाई लक`डाउन लगत्तै सं`घीय सरकारले रोजगारी दिने भएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रा`लयका अनुसार प्रधान`मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरो`जगारलाई सुचि`कृत गरि १०० दिन बरा`बरको रोजगारी दिनेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।
‘वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका, विदामा आएका, मुलुक भित्र काम नपाई रो`जगार केन्द्रमा सूची`कृत भएका सबै लाई समेटेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउ`नेग री ती`व्र रुपमा तयारी बढाएको छौं,’ श्रम मन्त्रा`लयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताए ।उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएकाहरुको आर्थिक अवस्था मू`ल्यांकन गरेर मात्रै रोज`गारी दिइनेछ । त्यसको जिम्मा स्थानीय तहले पाउनेछन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालसम्म १३ लाख नेपाली वेरोजगार रहेको भन्दै सरकारसँग रोजगारी माग्दै सुचि कृत भएका छन् । त्यसमध्ये यसवर्ष ५ लाखलाई काममा खटाउने सरकारको तयारी छ । वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका र विदामा आएका करिब १ लाखलाई समेत रोजगारी दिने सरकारको तयारी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।
‘सूचीकृत भएजतिका काममा आउछ भन्ने छैन्, त्यसैले ६ लाखलाई रोजगारी दिनेगरी तयारी अघि बढेको छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने म`न्त्रालयका उपसचिव डा। लोकनाथ भुसालले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्र`ममा यसअघि सुचि`कृत नभए`कालाई सरकारले मौका दिनेगरी गृ`हकार्य गरिरहेको छ । सुचिकृत हुनका लागि म्याद थप बारे सरकारले एक हप्ता भित्रै नि`र्णय लिन लागेको उनको भनाई छ ।